Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoProtests Rakkoo Siyaasaa Itoophiyaatif OPDOn Sababas ta'ee fala ta'uu hin dandeessu.
#OromoProtests Rakkoo Siyaasaa Itoophiyaatif OPDOn Sababas ta'ee fala ta'uu hin dandeessu.
(Jawar Moahmmad irraa)
Muktaar Kadiiri fi Asteer Maammo alanshanii tufuudhaan Lammaa Magarsaafi Warqinaa Gabayyoo ol baasan. Muktaarifi Asteer waggaa dabre kana Agaazii ummata keenya ficcisiisaa, warra fixes galateeffataa turan; galanni Wayyaaneen isaanii galchite salphina ta'uun bu'aa qabsoo ummata keenyaati. Garuu ergmatoota lama buusanii kanneen biroo lama olbaasuudhaan ummata Oromootin jijjiiramni dhufaa jiraatii qabsoo keessan dhiisaa manatti galaa jechuu barbaadan. Wanni hubatamuu qabu OPDOn maddas ta'ee fala gaafii Oromoo ta'uu hin dandeessu.
Sababni waldhibdee ummata Oromoofi mootummaa kanaa kaayyoo dhaabbanni TPLF lafa kaayyate, kan ol'aantummaa saba Tigree biyya sanitti uumuuti. OPDOs ta'ee dhaabbileen kitillayyoon biroo kaayyoo kana galmaan gahuuf dhaabbatan. Waggoota 25 dabraniis Wayyaaneedhaaf harka ta'uudhaan qabeenya Oromiyaa samsisaa, ilmaan Oromoo hedduu ajjeesisaa, kaan ammoo hisisaafi biyyaa ari'aa ol'aantummaa diinaggee Tigree jaaranii jiran. Ole ta'uudhaan Oromoo cafaqaa ol'aantummaa siyaasaa Tigree hidda qabsiisanii jiran. Kanaafuu namoota OPDOtti mataa ta'an jijjiraa ooluun hariiroo ummta Oromoofi mootummaa Wayyaanee jidduu jiru jijjiruu hin danda'u.
Hogganaan OPDO abbaa fedhes yoo ta'e hanga kaayyoon ol'aantummaa Tigree jaaruufi tursiisuu kaayyoo mootummaa kanaa ta'etti jijjiramni humaatuu hin dhufu. Nama OPDO keessaa jabaa jedhamuu kamiiyyuu fuudhanii osoo muummicha ministeeraa godhaniiyyuu gaafii Oromoo deebisuufi Wayyaaneedhaan walitti nu araarsuu hin danda'u. Hamma sirni ol'aantummaa Tigree utubuuf jaarame kun jirutti ,jara OPDO dhiisaatii Baqqalaa Garbaa kan ardiifi samiin jaalattu saniiyyuu osoo angoorra kaayanii mirgaafi dantaa ummata Oromoo eegsisuun hin danda'amu.
Oromoofi ummatoota biroof jijjiramni waaraa akka dhufuuf kaayyoon Wayyaaneen kun caphuun dirqama. Kaayyoo kana cabsuuf jaarmaya EPRDF jedhamu kan meeshaa saamichaa ta'ee fayyadu diiguun barbaachisaadha. Kana gochuuf ammoo madaalli humnaa sadarkaa walgitutti ol guddachuu qaba. OPDOn haala amma jirtuun humna TPLFn madaalu hin qabdu, horachuu silaa numa dandeessii, qalbii saniif tahu hin qabdu. Kanaafuu ummanni keenya sumsumaa Wayyaaneen jijjiraa ooltuun osoo qabsoo isaa finiinsuutu furmaata.
Mee akeekni Lammaafi Warqinaa ol baasuuf maali?
Wayyaaneen murtii kanarraa waa lama argachuu yaadde; qondaalota OPDO sadarkaa jiddu galeessaa sossobuufi bulchiinsa Oromiyaa daran too'annaa humnoota tikaafi waraanaa jala galchuufi.
- Lammaan qondaalota sadarkaa jidduu galeessaa keessatti hamma tokko waan jaalatamuuf, isa muuduun mormii dhaaba keessaa nu mudatu nuuf qabbaneessa; ykn ammoo warra nu mormu san ni qoqqoda jedhanii yaadu.
- Warqinaan mangoddootaafi abbootii amantii Oromoo biratti hamma tokko dhageettii waan qabuufi akka itti dubbisu waan beekuuf jara nurraa qabee Qeerroo addatti baasuuf nu fayyada jedhanii yaadan.
- Irra caalaa garuu tarkaaanfiin kun Wayyaaneen siyaasaan biyyattii gara walwaraansaa deemaa waan jiruuf haala mijeeffachaa akka jirtu agarsiisa. Jarri lachuu damee tikaa (security) irraa waan dhufaniif, jeneraalotaafi basaastota ishii waliin hojjachuuf ni aanjaya jettee abdatti.
Wayyaaneen akkas yaaddi, akkasiin albee nutti qarachaa jirti. Albee kana akka doomu ykn akka garas garagalu gochuun dirqama keenya.